izithakazelo – The Ulwazi Programme
Yazi Kabanzi Ngolimi Lakho Sisaqhuba khona lapho sashiya khona ngenyanga edlule, nge-Theme ethi “Yazi Kabanzi ngolimi lakho” Ngokubhala kukaDBZ Ntuli, izithakazelo uhlobo lwezibongo abanye abacwaningi abazibiza ngezithopho. UNtuli uchaza ngokuthi izithakazelo zike zibizwe ngezithopho njengendlela yokubalekela ukusebenzisa isibongo somuntu lapho enconywa ngezenzo ezinhle ezithile azenzile. Uma uzwa umuntu wakwaMhlongo ebizwa ngokuthi Njomane wongathuki, kodwa yazi … Read more
Categories Culture Tags DBZ Ntuli, Duma, Izibongo, izithakazelo
Usiko Lomntwana LakwaGasela
Lena yingxoxo kaSibongiseni Gasela ohlala endaweni yaseNanda, wazalelwa futhi wakhulela endaweni yaseMtubatuba, KwaZulu. Ngemuva kokuqeda isikole khona weza eThekwini ukuzofuna umsebenzi. Abantu bakwaGasela baziwa ngoMdunge, Chiliza njalonjalo. USibongiseni usitshele ngosiko lakubo kwaGasela okungenzeka ukuthi luyafana nokwalesinye isibongo. Imindeni inezinto noma amasiko abawalendayo ngokwenqubo yabo njengokuthi ezinye izibongo zifaka iziphandla, zigcabe ebusweni ezinye zibhoboze ezindlebeni njalo … Read more
Categories Culture Tags Amasiko esintu, Clan Praises, Communities, Gasela, Imiphakathi, Izinkolelo zesintu, izithakazelo, Traditional Beliefs, Traditional customs